China Mandarin Oroma ndị na-emepụta na ndị na-ere ahịa | Ihe nketa
Mba 61 Hongkong Road, Pingdu, Qingdao China
Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpọrọ Akọrọ
Osisi Mandarin ọhụrụ ahụ sitere na Huangyan site na ngwaahịa nke Geographical Indication. Anyị na-eji akụrụngwa kachasị ama ama iji hụ na ọ dị mma.
Huangyan oroma, moderately ụtọ na utoojoo, mellow uto, seedless; Heritage ọsụ na aka ekpepụsị oroma Mpekere, site na oyi na-azọnye na ala-okpomọkụ sirop, hụ na acidity na pụrụ iche keisi, na pụrụ iche ekpomeekpo.
Kemgbe emechara ya, ọ dọtara uche nke ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ, ma butekwa ọganiihu ụlọ. Ezigbo mma, ezigbo teknụzụ, na-anwale ule ahịa na ngwa ahịa. Heritage e ji mara-aka yipụ oroma Mpekere flake iguzosi ike n'ezi ihe, anụ siri ike, nụrụ ụtọ ụtọ na utoojoo, oroma anụ ọbọp ke oroma mesocarpon bụ n'ụzọ doro anya na anya, na mkpụrụ ọnụego naanị 10%, onye ọ bụla ibe boutique. Rehydration adịghị agwụ, yana ntuli aka mbụ maka tii mkpụrụ.
Uru Ahụike Mandarin Oroma
Oranges Mandarin, nke a makwaara dị ka mandarins ma ọ bụ mandarines, bụ mkpụrụ osisi citrus n'otu ezinụlọ dị ka oroma, lemọn, limes, na mkpụrụ vaịn. E jiri ya na oroma a na-ahụkarị, oranges mandarin pere mpe, na-atọ ụtọ, ma na-adịkwu mfe karị.
Tangerines bụ ụdị mandarin nwere miri emi na-acha ọbara ọbara-oroma na pebbly anụ ahụ. Clementines bụ obere ụdị mandarin oroma na-enweghị mkpụrụ nke na-ewu ewu n'ihi na ha na-agbachapụ ngwa ngwa ma dịkwa ụtọ karịa.
Oranges Mandarin nwere akụkọ ntolite ha na China oge ochie. Aha ha - mandarin - na-egosi nke ahụ. Otú ọ dị, kemgbe ha malitere, ha abụwo mkpụrụ osisi na-ewu ewu, na-amasịkarị. Taa, ha na-anọgide na-agbakwunye ọtụtụ ezinụlọ. Ha na-enyekwa ahu ike di iche-iche.
Uru Ahụ Ike
Ọbụghị naanị na mandarin na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe ịkwadebe, mana ha jukwa vitamin, mineral, na antioxidants. Ahụ gị chọrọ ihe ndị a ka ị dịrị mma. Ndị a bụ uru ole na ole ị ga-erite na iri obere mkpụrụ osisi a na-atọ ụtọ.
Beta-carotene na beta-cryptoxanthin bụ ogige ndị na-enye mkpụrụ osisi citrus dị ka tangerines na mandarins miri agba oroma ha. Ha bụ antioxidants nke nwekwara ike inye aka belata ihe ize ndụ nke ịmalite ụfọdụ ọrịa cancer.
Oranges Mandarin nwere ọbụna beta-carotene na beta-cryptoxanthin karịa oroma nkịtị, na-eme ha ezigbo mgbakwunye na nri gị.
Ahụ na-atụgharị beta-carotene na beta-cryptoxanthin n’ime vitamin A, nke dị mkpa maka sistemu nchekwa ahụ ike, ọhụụ dị mma, na uto na mmepe nkịtị.
Oranges Mandarin bụkwa ezigbo ihe na-enye vitamin C, isi ihe ọzọ na-edozi ahụ maka ịrụ ọrụ sistemu ọgụ, yana ịchekwa anụ ahụ ike na ọnya ọnya. Vitamin C na nri dị mma karịa ahụ mmadụ karịa vitamin C nke ị ga-enweta site na mgbakwunye.
Anyị kwenyere na:Innovation bụ mkpụrụ obi na mmụọ anyị. Ndụ dị elu bụ ndụ anyị.
Professional Mandarin Orange, Anyị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ site na ime ụkpụrụ nke “iguzosi ike n'ezi dabeere, imekọ ihe ọnụ kere, ndị mmadụ gbakwasara, merie-mmeri imekọ ihe ọnụ". Anyị na-atụ anya na anyị na ndị ọchụnta ego si n'akụkụ ụwa niile nwee mmekọrịta enyi na enyi.
Nke gara aga: Kantalup
Osote: Oroma uhie
Mandarin Oroma ka mmiri
Mịrị Mandarin Orange Peel
Mịrị Mandarin oroma Mpekere
Mkpụrụ mmanụ Mandarin mịrị
Paradaịs Green Green Mịrị Mandarin Oroma
A na-ehiwe nri nketa dabere na nri GMP nri. Ihe nketa bụ ụlọ ọrụ mmepụta mkpụrụ osisi a mịrị amị nke oge a.